Akụkọ - ofkpụrụ nke oghere mmiri na-enweghị mmiri: otu esi etinye nkwụnye mmiri na-adịghị
Cikpụrụ nke ogwe mmiri na-enweghị mmiri: otu esi etinye nkwụnye mmiri
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ plọg nwere arụmọrụ na-enweghị mmiri, ma nwee ike ịnye njikọ eletrik na nchekwa, akara ngosi, wdg. nchọpụta ngwá, square azụmahịa, okporo ụzọ, villa mpụga mgbidi, ogige, ogige, wdg, niile mkpa iji waterproof anya. You maara ụkpụrụ nke oghere mmiri na-enweghị mmiri? You mara ka esi etinye nkwụnye mmiri na-enweghị mmiri?
Okwu mmalite nye oghere mmiri
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ naanị plọg nwere arụmọrụ na-enweghị mmiri, kamakwa njikọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi nke ọkụ eletrik, mgbaama, wdg. akụrụngwa, nchọpụta nchọpụta, ogige azụmahịa, okporo ụzọ, mgbidi mpụga obodo, ogige, ogige, wdg, ha niile chọrọ iji oghere mmiri.
E nwere ọtụtụ ụdị na ụdị nke oghere mmiri na-ere na ahịa, gụnyere oghere mmiri na-enweghị mmiri na-eji na ndụ ụlọ, dị ka plọg triangle, nke a pụrụ ịkpọ soket, mana n'ozuzu ọ bụghị mmiri na-adịghị. Mgbe ahụ, otu esi ekpe ikpe nkwụnye mmiri na-egbochi mmiri? Ihe mgbochi mmiri bụ IP. Uzo kachasị elu nke mmiri mmiri bụ IP68. Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ndị nrụpụta ụlọ nke plọg mmiri na-enweghị mmiri, mana enwere ndị nrụpụta ole na ole nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala ụlọ, yabụ na ọ gaghị adaba iji nkwụnye akụrụngwa izugbe.
A pụrụ iji nkwụnye mmiri na-enweghị mmiri n'èzí, plọg 220v10a na plọg abụọ na steeti na-enweghị nchebe iji gboo mkpa ụlọ. (ọkwa nchedo IP66 nwere ike izute mkpa ezinụlọ) IP66 bụ mmiri na-agba mmiri dị ike n'akụkụ niile, ọ naghị abanye na mmiri mgbe ọ rụsịrị 1 mita mmiri maka elekere 1). Ekwesiri ighota na anya di n'èzí bu PC, ya mere ekwesiri itule ime agadi.
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ ịgbakwunye igbe na-enweghị mmiri na mkpuchi na mpụga oghere mgbidi n'ozuzu ya. Ebe igbe ahụ kpọtụrụ na mgbidi ahụ nwere akwa ute, ya mere ọ nwere ike ịbụ mmiri; ụfọdụ ogwe mmiri na-ekpuchi mmiri bụ ihe mkpuchi mmiri ozuzo rọba, na oghere oghere dị n'etiti na-eche ihu ma na-akwado isi mbepụ pụrụ iche. E nwere okpukpu atọ nke waya anọ, ụzọ atọ na-akwado waya ise na-akwado ibelata, cuttings.
Buru ụzọ wepụ oghere ahụ, tinyezie ihe mkpuchi mmiri ahụ n’azụ oghere ahụ, wee jikọọ ma dozie waya ahụ na interface nke oghere ahụ dị ka polarity (a na-ejikọ eriri ndụ na interface L, eriri waya ahụ na N interface, na ala waya jikọọ na e interface). A ghaghị ịgbakwunye ihe nkedo nkedo, ọ ka mma itinye nkedo ndozi nke oghere ahụ na mgbidi.
Ntinye nke oghere mmiri na mposi
Toiletlọ mposi bụ ebe kachasị dị jụụ n'ụlọ, na oghere dị mfe ịmịpụ mmiri, ya mere nhọrọ na ntinye nke oghere na mposi ga-elebara anya:
1. Mgbe ị na-etinye oghere n'ime ụlọ mposi, wụnye ya dị ka o kwere mee, pụọ na mmiri mmiri ma ọ bụ ngwaọrụ mpụta mmiri.
2. A ghaghị ichebe oghere dị na ụlọ mposi site na mkpuchi nchedo, a ga-ahọrọ ihe ntụgharị na ihe nkiri plastik.
3. Mgbe ị na-azụta oghere, lelee ma clip nke oghere ahụ siri ike zuru ezu, ike ntinye kwesịrị ezu, na clip nke oghere kwesịrị inwe ike. N'oge a, ihe owuwu nke oghere vidiyo na-agbaso usoro dị ike nke extrusion, nke na-eme ka ike dị ike n'etiti plọg na clip ahụ, na-ezere ihe ọkụkụ nke ikpo ọkụ n'oge ogologo oge, n'otu oge ahụ, extrusion siri ike na-eme ka nkwụnye ahụ ghara dị mfe ịda, ma na-ebelata ihe ndapụta nke ike ọdịda nke ihe mmadụ kpatara.
4. N'ime usoro ojiji, jide n'aka na aka akọrọ, ewetala mmiri iji gbanye ọkụ na oghere.
5. Jikwaa njiri mara njigide na ntọala, na ngwaahịa ndị zụtara n'onwe ya erughị eru. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eji ọkụ eletrik eme ihe ọ bụla, enwere ihe ize ndụ zoro ezo.
Ntinye nke oghere mmiri na-enweghị mmiri
Maka mma nke ọkụ n'ụlọ, ọtụtụ ndị na-etinyekwa oghere n'akụkụ, dị ka mbara ihu, Pavilion ogige na ebe ndị ọzọ. N'ihi mmiri ozuzo na ihe ndị ọzọ dị n'èzí, a ga-akwụ ụgwọ maka nhọrọ na ojiji nke ntọala:
1. A ga-etinye oghere ahụ n’ebe zoro ezo ebe a na-agaghị awụpụ mmiri mmiri ozuzo.
2. Anyị kwesịrị ịhọrọ nnukwu ụdị mmiri na-enweghị mmiri nwere ezigbo mma. Ọ bụrụ na ogo nke oghere na-enweghị mmiri adịghị mma, a ga-enwe nnukwu ihe ọghọm nchekwa mgbe ejiri ya na ihu igwe na-apụ apụ.
3. Gbalịa iwepụ ọkụ eletrik dị n’èzí n’oge mmiri ozuzo iji zere ihe ọghọm ndị ọzọ, ma gbalịa ka ị ghara iji ọkụ eletrik nọrọ ebe ahụ nso.
4. N'èzí anya na-agụnye mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu uzuzu, mgbochi ịka nká, wdg, ya mere a ghaghị iji oghere ndị ọkachamara mee ihe.
5. Oghere nchedo nke plọg na oghere n'èzí dịtụ elu, ọ na-atụ aro ka ịhọrọ IP55 ma ọ bụ karịa.